साहित्य • Gazzabko Online
बुद्धिसागर भन्छन्-“अनुवाद गर्न सबैभन्दा गाह्रो”
लेखक तथा साहित्यकार बुद्धिसागरले कुनै कुरा लेख्नु भन्दा अरुको पुस्तक अनुवाद गर्नु धेरै गाह्रो हुने बताएका छन् । उनले अनुवाद गर्नु गाह्रोसँगै पूण्यको काम पनि भएको उल्लेख गरे । मञ्जुश्री ..
लालबाबु पण्डितको आत्मकथा ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको जीवन कथा अब पुस्तकमा पढ्न पाइने भएको छ। उनको जीवनी पुस्तक सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष तराईवासीको महान पर्व छठको अवसर पारेर पब्लिकेसन नेपालयले घोषणा गरेको हो। ..
“तिमीलाई भुल्ने ट्याब्लेट बजारमा आएको छ”
प्रेम पुन मुक्तक तिमीलाई भुल्ने ट्याब्लेट बजारमा आएको छ । बजारबाट अब मेरो दराजमा आएको छ । अब त खान पनि नसकिने भयो प्रिय, पहिले सयमै पाउँथ्यो अहिले हजारमा आएको ..
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औँ जन्मजयन्ती
नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका ..
१ सय २० गीत समावेश ‘मनभित्रको मन’ सार्वजनिक
कवि तथा गीतकार कृष्णबहादुर थापा क्षेत्रीको गीतिसंग्रह ‘मनभित्रको मन’ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको अनामनगरस्थित विनायो क्याफेमा आयोजित कार्यक्रममा उनको गीतिसंग्रह वरिष्ठ कवि तथा गीतकार रत्नशमशेर थापाको हातबाट सार्वजनिक गरिएको ..
मुक्तकः माया गर्नेहरुको पनि जिवन बिमा हुनुपर्छ?
प्रेम पुन पेशाले पत्रकार हुन् । विगत ८ वर्षदेखि पत्रकारीतमा सक्रिय पत्रकार पुन साहित्यमा पनि रुचि राख्छन् । उनी साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउँछन् । विशेषगरि उनको दक्षता गजल र ..
डण्डिफोर रै’छ नि त ! : प्रेमकथा
मेरो छातीको सिरानीमा आफ्नो च्युँडो अड्याएर आफ्ना एकजोर आँखाहरूले मेरा अर्काजोर आँखाहरू परेली नझिम्क्याईकन निकैबेर नियालिरहन्थ्यौ तिमी! ‘के हेरेकि?’ म आँखा झिम्क्याएर सोध्थेँ। ‘मैले जितेँ।’ हाँस्थ्यौ तिमी। मलाई नै थाहा ..
सामाजिक यथार्थपरक नाटक जूनकिरी भोलीबाट राष्ट्रिय नाचघर जमलमा लाग्ने भएको छ । नाटकमा नानी थापाको एक लेखन,निर्देशन र प्रस्तुती रहेको छ । हरेक दिन नाटक २ शो लाग्ने छ । दिउँसो ..
फुच्ची जमुनाको ‘पैतालामा जीन्दगी’ लोकार्पण
गजलकार फुच्ची जमुनाको गजल संग्रह पुस्तक ‘पैतालामा जीन्दगी’ लाकार्पण भएको छ । राजधानीको टंगालमा शनिवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमुख अतिथी सत्यमोहन जोशीले पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन् । बुलबुल प्रकाशनले ..
‘महको म’ सार्वजनिक हुँदै
हरिवंश आचार्यपछि अब मदनकृष्ण श्रेष्ठको किताब सार्वजनिक मंगलबार हुने भएको छ। मह जोडिको रुपमा परिचित हरिवंश र मदकृष्ण अब दुबै लेखनीमा आएका हुन्। हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छे र हरिबहादुर ..